Zvinoumba kukandira simbi mutopota
A: Kandira simbi pombi inodzivirira kupararira kwemoto zvirinani pane epurasitiki pombi nekuti cast-iron haina kupisa. Icho hachitsigire moto kana kupisa, ichisiya gomba iro utsi nemirazvo zvinogona kumhanya nepakati pechivakwa. Kune rimwe divi, pombi inogona kutsva yakaita sePVC neABS, inogona kupisa, Kudzima moto kubva pombi inopisa kunoshanda zvakanyanya, uye izvo zvinhu zvinodhura, asi kumisa moto kwepombi yesimbi, pombi isingatsve, iri nyore kuisa uye isingadhuri.
B: Imwe yeakanakisa hunhu hwesimbi simbi mutopota ndehurefu hwayo. Nekuti plastiki pombi yakaiswa muhuwandu hwakawanda chete kubvira kutanga kwema1970, hupenyu hwayo hwebasa hausati hwatemwa. Nekudaro, yakakandwa simbi pombi yanga ichishandiswa kubvira kuma1500s muEurope. Sezvineiwo, yakakandwa simbi pombi yanga ichipa matsime eVersailles muFrance kweanopfuura makore mazana matatu.
C: Ose akakanda simbi mutopota uye epurasitiki mutopota anogona kuva panjodzi inoparadza zvinhu. Kukanda simbi pombi inoenderana nekuora kana iyo pH nhanho mukati mekombi ichidonha kusvika pazasi pe4.3 kwenguva yakareba, asi hapana dunhu retsvina muAmerica rinotendera chero chinhu chine pH pazasi pe5 kuti chiiswe mukati mayo nzira yekuunganidza tsvina. 5% chete yeivhu muAmerica ndidzo dzinokanganisa kukanda simbi, uye kana yaiswa muivhu idzodzo, pombi yesimbi inogona kudzivirirwa nyore uye isingadhuri. Kune rimwe divi, pombi yepurasitiki iri panjodzi kune akawanda acids uye solvents uye inogona kukuvara nemafuta epeturu. Uye zvakare, zvinwiwa zvinopisa pamusoro pezana nemakumi matatu emadhigirii zvinogona kukuvadza masisitimu ePV kana ABS, asi hazvikonzeri dambudziko repombi yesimbi.